भूपिलाई राज्यले उचित सम्मान गर्नै सकेन : प्राडा. कृष्णहरि बराल | Ratopati
सन्दर्भ : भूपि जन्मजयन्ती
भूपिलाई राज्यले उचित सम्मान गर्नै सकेन : प्राडा. कृष्णहरि बराल
personमोहन दाहाल exploreकाठमाडौं access_timeपुस १२, २०७५ chat_bubble_outline0
नेपाली साहित्य जगतका एक मूर्धन्य कवि हुन्– भूपि शेरचन । उनको जन्म १९९२ पुस १२ गते भएको हो भन्ने धेरै ठाउँमा लेखेको पाइन्छ । तर त्यसबारेमा प्राडा. कृष्णहरि बरालले प्रश्न उठाएका छन् । उनका अनुसार भूपिको जन्म १९९२ पुस १० गते नै भएको हो । उनले औंशीमा जन्मिएको र मूलमा परेको भन्ने कुरा कतिपय ठाउँमा व्यक्त गरेका छन् र आमा टोक्ने मूल परेको सन्दर्भ पनि उल्लेख गरेका छन् । १९९२ पुस १० गते औँशी परेको छ र १२ गते चाहिँ द्वितीया तिथि पर्नेभएकाले पुस १० नै भूपिको जन्मदिन हो भन्ने प्राडा. बरालको दाबी छ ।
भूपिको जन्मस्थान मुस्ताङ, थाकटुकुचे हो भने मृत्यु २०४६ जेठ १ भएको थियो । बीएसम्मको अध्ययन गरेका भूपि शेरचन राजनीतिमा पनि सक्रिय थिए । २०१२ सालमा उनी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको जिल्ला सचिव भएका थिए । २०२६ सालमा उनी नेपाल राजकीय प्रज्ञाप्रतिष्ठानका सदस्य भए । सानैदेखि साहित्य सिर्जनामा लागेका भूपिका ‘परिवर्तन’ (नाटक, २०१०), ‘नयाँ झ्याउरे’ (कविता सङ्ग्रह, २०१०), ‘निर्झर’ (कविता सङ्ग्रह, २०१५), ‘घुम्ने मेचमाथि अन्धो मान्छे’ (कविता, २०२५) छन् ।
थोरै कविता लेखे पनि भूपिको कवित्व क्षमताले उनी अझै प्रभावशाली छन् । उनका कविताहरु अझै समय सान्दर्भिक छन् । यिनै भूपिका जन्म सन्दर्भ पारेर उनको कवित्व र व्यक्तित्वका बारेमा प्राडा. कृष्णहरि बरालसँगमोहन दाहालले गरेको कुराकानी :
भूपिको व्यक्तिगत जीवन कस्तो थियो ?
मैले सानैमा त उनलाई चिनिनँ । पहिले मैले भूपिलाई एउटा कविकै रूपमा चिनेको हुँ । त्यसमा पनि ‘घुम्ने मेचमाथिको अन्धो मान्छे’ सङ्ग्रहका कविताहरू मनपथ्र्यो । नेपाली विषय पढेको हुनाले उनलाई सामान्य ढङ्गले नचिन्ने त कुरै भएन । म २०३३ मा काठमाडौँ आएँ । काठमाडौँ आइसकेपछि मलाई कविता मन पर्ने हुनाले उनलाई भेट्न एकेडेमी गएँ । एकेडेमीमा त्यतिखेर भूपि शेरचन चाहिँ घुम्ने मेचमाथि आसिन हुनुहुन्थ्यो । मैले भेटेर भने, हजुरलाई भर्खर भेट्दैछु, ‘घुम्ने मेचमाथि अन्धो मान्छे’ लेख्नुभयो, अहिले त आफै घुम्ने मेचमाथि नै हुनुहुन्छ नि ? भनेको, हैन त्यस्तो भए तापिन म अन्धो चाहिँ छैन । म छ्याङ्ग देखिरहेको छु, सबै कुरा भन्नुभयो । त्यसपछि विस्तारैै विस्तारै उहाँसँग जाने, भेट्ने क्रम रह्यो । उहाँको घरमा पनि निकैचोटि पुगेको छु । त्यहाँ धेरै चोटि भाउजूले कालो चिया खुवाउनु भएको छ । उहाँकी छोरी कवितासँग पनि चिनजान भयो ।
दृष्टिकोणका हिसाबले उहाँ एकदमै सर्वहारा हुनुहुन्थ्यो । सर्वहारा नै नाम लेखेर हिँड्नु भएको मान्छे । आफ्नै परिवार पनि शोषक सामान्त भन्दै हिँड्ने मान्छे । यसबाट सारा जनतालाई मुक्ति दिलाउनुपर्छ भन्ने मान्छे । त्यस्तो अवस्थामा उनको पहिलो कविता सङ्ग्रह २०११ सालमा ‘नयाँ झ्याउरे’ भन्ने पुस्तकमा नाम नै सर्वहारा मात्र छ, सर्वहाराका नामबाट निस्केको छ । त्यसका कविता हामीले पढ्यौँ भने पूरै त्यसमा प्रगतिवादी विचार, माक्र्सवादी विचार, रातो सूर्य उदाउँछ उदाउँछ, हामी जित्छौँ जित्छौँ भन्ने दृष्टिकोण छ । ‘निर्झर’मा आउँदा पनि छ, ‘तिम्रो धनवाद र हाम्रो जनवाद दाज्छौँ, कसले जित्छ हेरौँला’ भन्ने छ । अनि नयाँ झ्याउरेमा पनि नेपाली काँग्रेसमा अन्तरकलहहरू छ नि त्यसको चित्रण छ । ‘कोइराला बाजे, झगडा गरी यसरी नमास नेपाल’ भनेर यस्तो किसिमका कविताहरू लेख्या छन् । देशलाई पुँजीवादको चङ्गुलबाट मुक्त गरेर कम्युनिज्म ल्याउनुपर्छ भनेर एकदमै त्यो आक्रामक अभिव्यक्ति त्यो नयाँ झ्याउरेमा हामी पाउँछौँ । उहाँ कसरी हिँड्नुभयो त्यस समयमा त्यो त म जान्दिनँ ।
मदनमणि दीक्षितले मलाई भूपिका बारेमा कुराकानी हुँदाखेरी बनारस गएको बेलाको एउटा संस्मरण सुनाउनुुहुन्थ्यो । बनारसमा एकजना सर्वहारा आएका छन् रे । उहाँहरू पनि कम्युनिस्ट सिद्धान्त प्रतिपादन गरेर हिँड्नुभएको मान्छे । भेट्नुपर्यो भनेर गएको एकदमै सेतो, सुकिलो कोट लगाएका, एकदम सफा, एउटा हातमा चुरोट, गिलासमा पनि अलिकति लिएर बसेको, छक्क पर्यौँ सर्वहारा देखेर, भन्नुहुन्थ्यो पहिलो चोटि । मतलब त्यस्तो टिपटप भएर हिँड्नुपर्ने मान्छे । अनि भेट भइसकेपछि दाइ कम्युनिस्ट सिद्धान्तमा लागेर आउनुभयो भनेर काटेर अहिले भूपि शेरचन यस्तो हुँदा अलिकति चिन्ता लाग्दैन ? ‘मैले अन्तरवार्तामा भनेको छु, धेरै ठाउँमा भनेको छु, यिनीहरूले विकास गर्दैनन्’ भनेर लेख्नुभएको छ उहाँले । यो देशमा काँग्रेस होइन, काम गरेस् भन्ने मान्छेको खाँचो छ । कम्युनिस्ट होइन, कर्तव्यनिष्ट मान्छेको खाँचो छ भनेर लेख्नुभएको छ ।
समयक्रमा मैले उहाँलाई मैले केही गीतहरू देखाएँ, मेरो ३३ सालमै ‘म भक्त हुँ यो देशको’ भन्ने गीत रेकर्ड भएको थियो । भूपि दाइलाई भेट्नेबेलासम्ममा अरू आधुनिक गीतहरू पनि रेकर्ड भएका थिए । त्यसपछि वीरेन्द्र राजाका बारेमा लेख्नुस् न गीत भन्नुभयो । त्यही एकेडेमीमै हुँदाखेरी भन्नुभयो । मैले भने, तपाईं त्यत्रो मान्छे कसरी यसरी राजावादी हुनुभयो भनेर मैले सोधेँ । राजा खराब छैनन्, यिनलाई खराब मान्नेहरूले बनाएका हुन् । वरपर बस्ने मान्छेले खराब बनाएका हुन् । यी पञ्चहरूसँग मेरो एकरति विश्वास छैन भनेर भन्नुभयो । अनि एउटा भन्नुहुन्थ्यो, मरिचमान सिंह, सायद प्रधानमन्त्री थिए । एकेडेमीले मागेजति बिदा दिएन क्यारे । त्यो नदिएका बेलामा चाहिँ ‘म यिनलाई एउटा कविता लेखेँ भने उडाइदिन्छु, यिनले के सम्झेका छन् मलाई भन्नुहुन्थ्यो । मतलब पञ्च र पञ्चायततिर त्यति होइन, यद्यपि उनले कता कता महेन्द्रले प्रजातन्त्रको नेपालीकरण गरे भनेर पनि गीत लेखेका छन् । राजाप्रति आस्था भयो, आस्था भएपछि पञ्चायतप्रति भयङ्कर विद्रोह पनि त्यति गरेनन् । हुन त ‘सर्पको खोजीमा’ सर्पको खोजी भएर दुलोमा पसेको होइन, यो खोज्दै हिँडेको छु भनेर दरबारभित्र पसेको सङ्केत पनि गरेका छन् । तर भूपि शेरचन राजालाई निकै मनपराउने चाहिँ पक्कै हो । मलाई उहाँले त्यो चाहिँ लेख्नुस् न राजाको उल्लेख गरेर गीतसित भन्नुभएको थियो । अनि मैले खै के लेख्नु भने । यत्तिकै गफगाफ हुन्थ्यो । अनि आफू बिरामी भएका कुराहरू लङ्ग्ससँग सम्बन्धित बिरामी त्यो कुरा गर्नुहुन्थ्यो ।
भूपिसँगका रमाइला घटना केही छन् ?
म उहाँसँग इन्फर्मल त हुन सकिनँ, उहाँको साथी पनि होइन । मैले एउटा कविता सङ्ग्रह तयार पारेको थिएँ । त्यस सङ्ग्रहको भूमिका लेखाउनुपर्यो भनेर भूपि दाइलाई दिएँ । त्यसपछि भूपि सारै बिरामी हुनुभयो । वीर अस्पताल भर्ना हुनुभएको थियो । म र मेरी मिसेस दुवैजना भूपिलाई भेट्न भनेर गायौँ । उहाँलाई नाकमा अक्सिजन दिइराखेको रहेछ, हातमा चुरोट थियो । त्यो देखेर मलाई अचम्म लाग्यो । अक्सिजनको कमी भएको बेला कार्वडाइअक्साइड (चुरोट) तानिरहेको देखेँ । अनि के गरेको भनेँ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हेर्नुस् ममा एकदमै रागात्मक सम्बन्ध चाहिँ यसैको रहेछ जस्तो लाग्यो मलाई । यो छोड्नै सकिनँ’, उहाँले भन्नुभयो– ‘रक्सी छोडेँ, कति गरेर यो चाहिँ मैले एकदमै छोड्न नसक्ने भएँ ।’ यो त अत्यन्त विरोधाभाषा भयो नि त भनेँ । ‘होइन मैले यो छोड्नै सकिनँ, बडो रागात्मक सम्बन्ध रहेछ’, भन्नुभयो ।
मलाई बडो अचम्म लाग्यो । अक्सिजन दिइरहँदासम्म पनि चुरोट कसरी छोड्न नसकेको होला भनेर । अझै अचम्म लागिरहेको छ, अहिले सोच्छु छक्क पर्छु । मैले देख्दा उहाँ शारीरिक रूपमा दुब्लो भइसक्नुभएको थियो ।
भूपिले कम्युनिस्ट पार्टी किन छोड्नुपर्यो ?
आफ्नै कतिपय कारणले उहाँले कम्युनिस्ट पार्टी छोडेर यतातिर लागे होलान् । कतिले त आर्थिक समस्याले छोडे पनि भन्याछन् । बिरामी धेरै हुनलागे, उपचारकै लागि पनि गह्रै भएर पनि सरकारको नजिक भए भनेका छन् । उहाँ चाहिँ कम्युनिस्ट सिद्धान्तप्रति आस्थै नभएर पनि भनेका छन् । भूपि आफैले पनि भनेका छन्, ‘मलाई दुईवटा ‘क’ले बिगारे, कम्युनिस्ट र कविताले ।’ त्यो उहाँले भन्नुभएको छ तर अन्तरको कुरो त बुझ्न गारो छ । अनुमानका कुरा किन गर्नु ।
भूपिका कविता विशिष्ट खालका छन् भनिन्छ नि ?
नेपाली कविताको इतिहास हेर्ने हो भने प्रारम्भिक चरणमा वीरधारा र भक्तिधारामा कविता लेखिएका पाइन्छन् । कवितामा आफ्ना नायकको स्तुति गर्ने, त्यसपछि भगवानको स्तुति गर्ने कार्य भयो । त्यसपछि मोतिराम भट्टबाट शृङ्गारिक धारा प्रधान भयो । यसपछि अरू धारा पनि गौण रूपमा विकसित हुँदै आए । लेखनाथ पौडेलका कविताहरू आइसकेपछि शास्त्रीयतावादी धारा सुरु भयो । शास्त्रीय धारामा संस्कृतका छन्दहरू अलि धेरै हुन्छन् । छन्दमा मोतीरामहरूले पनि कविता रचना गरेका थिए । त्यसपछि देवकोटाको आगमन भयो । यसपछि स्वच्छन्दतावादी धारा आए र देवकोटाले एकछत्र नेतृत्व गरे भन्ने भनाइ छ । त्यही क्रममा एकातिर स्वच्छन्दतावादी धारा, अर्कोतिर प्रगतिवादी धारा बीचतिरबाट आए ।
कतिपय समीक्षकले के गरिदिए भने, जुन क्रान्तिकारी धारा छ, त्यसलाई पनि स्वच्छन्दतावादकै एउटा अङ्गका रूपमा पनि हालिदिएको देखिन्छ । त्यसरी हाल्नु उपयुक्त हुन्छजस्तो मलाई लाग्दैन ।
यो २००७ साल ८ साल १० सालतिर हामीले हेर्यौँ भने अत्यन्तै धेरै राजनीतिक विषय कवितामा लेखिएको छ । केआई सिंहलाई फिर्ता गर भन्ने कविताहरू, गीतहरू त्यसरी छापिएका छन् । त्यस्तो अवस्थामा भूपिले २०११ सालामा नयाँ झ्याउरे कविता सङ्ग्रह प्रकाशनमा ल्याए । त्यतिबेलासम्म भूपि कम्युनिस्टको एकदमै सक्रिय कार्यकर्ता भएको थाहा हुन्छ । किताब पढ्दाखेरी कम्युनिस्ट आउँछ आउँछ भन्ने दृढ विश्वास छ । डान्स क्लब खुल्यो रे भनेर अन्त्यन्त विरोध र आक्रमण छ । अनि मातृका र बीपीहरूको टसललाई पनि कविताभित्र राखिएको छ । ‘नेपाललाई मास्ने काम नगर तिमीहरू, झगडा नगर’ भनेर झ्याउरे लयमा धेरैजसो १६ अक्षरमा लेखिएको छ ।
एकातिर देवकोटा, लेखनाथ पोड्याल, माधव घिमिरे, बालकृष्ण समजस्ता कविहरू पनि छँदैथिए । भूपि शेरचन विषयवस्तुको प्रस्तुतिका फरक थिए । कविताभित्र सङ्गीत चेतनाको अत्यधिक प्रयोग, गद्यभित्र पनि सङ्गीत चेतना छ ।
त्योबेला गोपालप्रसाद रिमालले गद्य कविता सुरु गरेका थिए । रिमालले सुरु गरेको गद्य कवितामा ऊर्जा थप्ने काम देवकोटाबाट पनि भयो । क्रान्तिको चेतना पनि गद्य कविताबाटै देवकोटाको धेरै आयो । प्रमिथस महाकाव्यमा आउँदा पनि त्यो गद्यमै छ । त्यसपछि बालकृष्ण समले पनि गद्य कविताहरू लेखेका छन् ।
त्यो बेला भूपिले कवितामा हाम्रा दिनदिनै आइपर्ने समस्या लेखे । अनि नयाँ झ्याउरे हुँदै निर्झर कवितासम्म आउँदा भूपिलाई प्रगतिवादबाट हटाउन सक्ने कुरै थिएन । विषयवस्तुमा नै पूरै साम्यवाद आउँछ । निर्झरमा पनि त्यो कुरा छ । स्वच्छन्दतावादी पनि ठाउँ ठाउँमा छ । तर जब ‘घुम्ने मेचमाथिको अन्धो मन्छे’ प्रकाशित भयो, त्यसबाट मैले चाहिँ के निष्कर्ष निकालेँ भने यो ‘कवि भूपि ः विश्लेषण र मूल्याङ्कन’ लेख्दाखेरी पनि भूपि त्यतिखेरसम्म पहिलेको जस्तो नयाँ झ्याउरेमा जस्तो पनि रहेनन् । रोमान्टिसिजमको स्पर्श निर्झरमा पनि रहेन र आलोचनात्मक यथार्थवादतिर गए । त्यही स्तरबाट समाजमा भएका विकृति र विसङ्गतिलाई प्रहार गर्ने व्यङ्ग्य चेतनाका एकदमै प्रखर भएर आए ।
व्यङ्ग्य मात्र ठाडो भएको भए पनि त्यो रमाइलोआउँदैन थियो । कलाले यस्तोसँग छोपिदियो नि, व्यङ्ग्यमै कलाले भरिदिए । उनका कवितामा व्यङ्ग्यमा कस्तो छ भने अनुप्रास (राइम) को जुन शक्ति हो, त्यो त पहिले पहिले छन्दहरूमा प्रायः गरेर अन्तिम अनुप्रास छ नि त्यसलाई पनि माथ गरेर ८, ९, १०, १२ पङ्क्तिमा लेखे ।
एकातिर अनुप्रासको प्रयोगका दृष्टिले, शब्दसङ्गीत प्रयोगका दृष्टिले पनि त्यो बढिरहूँ लाग्ने मिठासयुक्त छन् । उनले हाम्रा विकृतिहरूलाई मात्र होइन, उनका आफ्नै विकृतिलाई पनि, आफूले भन्न नसकेका कुरा घुमाएर भन्नेका छन् । त्यो सामाथ्र्यले गर्दा पनि पढूँ पढूँ लाग्ने छन् उनका कविता ।
कविको एउटा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ । मलाई कस्तो लाग्छ भने कवितामा वस्तुपरक यथार्थ, वस्तुतथ्य त्यति ठूलो कुरो होइन । छन्दमा त त्यो पनि लेख्न सकिन्छ । गद्यमा पनि लेख्न सकिन्छ । जे देख्यो त्यसको सोलोडोलो बयान गर्न सकिन्छ । त्योभन्दा पनि अर्को नयाँ सत्यको खोजी राम्रो र सफल कविको महत्त्वपूर्ण विशेषता हो । भूपि शेरचनका कवितामा त्यो अत्यधिक देखिन्छ ।
हामीले आम मानिसले देखेको तर भन्न नसकेको या ठम्याउन नसकेको कुरा ठ्याक्कभन्दा आम मानिसले के ठाने भन्ने हो । सुरुको घुम्ने मेच माथिको अन्धो मान्छे, मेरो चोक छ, मान्छेले बनाएका देवता र देवताले बनाएका मान्छे दुवैको बासमा त्यस्ता विषय छन् । हेर्नुस् न, कसरी भनिएको छ– मान्छेले देवता बनाए भन्छन् भौतिकवादीहरू भने अध्यात्मवादीहरू देवताले मान्छे बनायो भन्छन् । दुवैको बास छ तर दुवै चिन्तित छन् । एउटाले न कसैले सोध्छ, न कसैले ढोग्छ, फुर्सदै छैन । अर्को समूह मन्दिरकै अगाडि मात्र कुदेर हिँडेका छन् । उनलाई त्यो चिन्ता छ ।
‘मान्छेलाई रातभरि उपियाँले टोक्छ दिनभरि रुपियाँले टोक्छ ।’ रुपियाँ कमाउने नाममा मान्छे यति अन्धो भएर लागेको छ भन्ने व्यङ्ग्य हेर्नुस त । साँच्चै नै प्रभावकारी छ । कल्पनाको दृष्टिले कलाका दृष्टिले हो भने त्यो मैन बत्तिको शिखा झन् धेरै देखिन्छ । तीबाहेक अरू कविताहरू पनि त्यस्तै देखिन्छन् । उनलाई सारमा हामीले खिँच्यौँ भने समकालीन विकृतिप्रति व्यङ्ग्य गरेका छन् ।
लाहुरेहरूप्रति भूपिको अत्यधिक चासो छ । लाहुरेहरू बाहिर जानुपर्दाको अवस्थामा चिन्तित छन् । आफ्नो देशका लागि लडेका भए त फाइदा हुने थियो नि । देशको सिमाना बढ्थ्यो नि । अर्काको देशका लागि लडेर वीर कहलिए । ‘हामी वीर छौँ त्यसैले हामी बुद्धु छौँ’, भने । अर्काको भूमि बढाउनका लागि लड्यौँ । वीर यसकारण कि अर्काका लागि लडेर नेपालीहरू वीर छन् भन्ने थाहा पाए । भूपिले वीरले भक्कु राँगोसमेत भन्न भ्याएका छन् । यस्तो तिमीहरू अरूका लागि मात्र किन गर्छौ, आफ्ना लागि गर भन्ने चाहना हो उनको ।
भूपि नारीप्रति अत्यन्त संवेदनशील छन् । नारी हक अधिकार हुनुपर्छ भनेको छन् । निर्झर कविता सङ्ग्रहमा नारीका बारेमा लेखिएको छ :
‘ठूलो यो चार्जीबारी,
त्यसभित्र एउटा घरबारी,
त्योभित्र एउटा सानो अल्मरी,
अल्मरीभित्र दुई चरवटा गहना र दुई चारवटा सारी,
यति हो तिम्रो जिन्दगीभरीको कमाई नारी !
भनिएको छ । त्यतिखेर उनमा त्यो सचेतता । अहिले हामी लैङ्गिकता, नारीवादका कुराहरू जुन गरेका छौँ नि भूपिले त पहिल्यै पहिल्याएका रहेछन् नि त्यो ।
ज्योतिषीहरूप्रतिको व्यङ्ग्य हेर्नुस् । सरै ठूलो भन्नु पर्दोरहेनछ नि । एउटा भारी ट्रकले किचेर बच्चा मर्यो, बच्चाको हात खोलेर हेर्दा आयु रेखा धेरै लामा थिए । कत्रो सेटायर छ । एउटै हरफले यो क्षेत्रप्रति कत्रो अविश्वास पैदा गरायो । हत्केला खोलेर हेर्दा चाहिँ आयुरेखा लामा छन् तर बच्चा मर्यो ।
अब सहिदप्रति सम्मान नभएकोमा सहिदहरूमा उनले भने ‘बाँचेर त हेर बाँच्न झन् गाह्रो छ’ भने । यो अहिलेको परिस्थितिप्रति को सहिद, कसको सम्मान छ यहाँ ? त्यो केही देखिँदैन ।
लाहुरेहरू अरूको देशका लागि लडेको सन्दर्भ, महिलाहरूमाथि भएको अन्याय, अत्यचार, युक्लिप्टसका रुखहरूझैँ नङ्ग्याइएका देख्छु आदि चेतना विम्ब बेजोडका छन् ।
अनि अर्को भन्नै पर्ने कुरा, व्यक्तिगत विम्बहरू हुन् । यस्ता यस्ता विम्ब प्रयोग गरेका छन् कि यस क्रममा यौनविम्बहरूको पनि अत्यधिक प्रयोग भएका छन् । राम्रोसँग हेर्यो भने एक्लै हाँसो पनि उठ्छ र कसरी ठम्याउन सकेहोलान् । व्यक्तिगत विम्बको पहिचान एकदमै गाह्रो कुरा हो । मान्छेले परम्परित विम्बहरूलाई, प्रतीकहरूलाई मात्र पहिचान गर्न सक्छ ।
तिम्रो अनुहार चन्द्रमा जस्तो भन्दा परम्परित विम्ब भयो । उनले लेते खोला भने नि त्यो होचिमिनको चिठीमा । आफ्नो घरनिरको त्यो लेते खोलालाई यस्तो विम्ब बनाए कि भियतनामलाई लेते खोलासँग दाँजेका छन् । जसरी भियतनामले अमेरिकासँग भिड्न त नसक्ला तर कुनै बेला शक्ति आउँछ नि, बाढी आएको बेला त्यो लेते खोला ओर्तिर पर्तिर भत्काएर सुसाएर हिँड्छ नि त्यस्तै तिमीहरू गर्न सक्छौ । त्यो लेते खोला नै व्यक्तिगत विम्ब के ।
बालदिवसलाई हेर्नुस् । बालदिवस मनाएको दिन त्यसैको समाचारले ढाकिएको पत्रिका ओडेर बालक सडकमा सुत्याछ । कत्रो व्यङ्ग्य छ भन्नु न । यो व्यङ्ग्य चेतना अनि व्यक्तिगत विम्बको अत्यधिक प्रयोग हो ।
अत्यधिक अनुप्रास, लयात्मकता पनि कस्तो भने झण्डै झण्डै एज्रा पाउन्ड भन्ने अङ्ग्रेजीमा थिए । उनी र ह्विट म्यानले सुरु गरेका भए पनि भूपिका कवितामा चाहिँ छन्दै जस्तो थिए । भूपि शेरचनका कविता त्यस्तै लघुगुरु मिल्ने खालका छन् । त्यस्तो किसिमको गद्य छन् । सर्र आउँछ गद्य, गद्यपछि पद्यमा पसेजस्तो किसिमको प्रवृत्ति छ । लयात्मकताको अत्यधिक प्रयोग, अनुप्रासको प्रयोग, व्यङ्ग्यको अत्यधिक प्रयोग, त्यसमा पनि हामीले देखेका भोगेका व्यक्तिगत विम्बको अत्यधिक प्रयोग छ । यिनै विशेषताले भूपि शेरचन देवकोटा भन्दा भिन्न, लेखनाथ भन्दा भिन्न, समभन्दा भिन्न छन् ।
सङ्ख्यात्मक रूपमा हेर्ने हो भने देवकोटाका भन्दा कम छन् । खण्डकाव्य स्तरको कृति पनि छैनन् । तर यस्तो अवस्थामा रह्यो कि राम्रो कवि हुन, चर्चित कवि हुन, स्तरीय कवि हुन सङ्ख्या मात्रै ठूलो कुरो होइन भन्ने देखियो । यसले उनलाई देवकोटाभन्दा भिन्न बनायो । कतिपय समालोचकले भने देवकोटाको ‘अम्रेला’बाट फुटेर एकातिर मोहन कोइराला जटिल बने भने अर्कातिर भूपि सरल बने । सरलताभित्रको जटिलता, सरलताभित्रको गम्भीरता भूपि शेरचनको महत्त्वपूर्ण विशेषता हो ।
उनी प्रज्ञाप्रतिष्ठानमा गएपछि कम्युनिस्टहरूले ज्यादै आलोचना गरे भनिन्छ, किन आलोचना गरे ?
प्रगतिवादी माक्र्सवादी साहित्यका बारेमा माओले ‘लेखाइ मात्र प्रगतिवादी भएर मात्र हुँदैन । मान्छे स्वयम्को दिनचर्याका विचारधारा प्रगतिवादी हुनुपर्छ भनेका छन् । कोही मान्छे व्यक्तिगत रूपमा कम्युनिस्ट नभएर पनि कम्युनिस्टको सिद्धान्तलाई एकदमै राम्रो पाराले टड्कारो रूपमा लेख्न सक्छ । कोही कम्युनिस्ट नै भएर लेख्न सक्छ । कम्युनिस्ट भए लेख्नु राम्रो हो’ भन्ने दृष्टिकोण छ ।
भूपि शेरचनले सर्वहारा जस्तो नाम राखेर, टाइटल राखेर त्यत्रो क्रान्तिकारी, कम्युनिस्ट आउँछ आउँछ भनेर लेख्ने मान्छे पछि फ्याट्ट त्यो छोडेर आलोचनात्मक यथार्थवाद भएर केही विकृति त देखाइरहे । गरिब दुःखीप्रति उनले अन्तरवार्ताहरूमा गरिब दुःखीकै पक्षमा छन् तर साम्यवादी सिद्धान्तप्रति आफूलाई वितृष्णा उत्पन्न हुनुमा उनलाई अरू कारणहरू पनि दिएका छन् ।
कोही नेताले चाहिँ अब यो नेपाललाई नै अर्को ठाउँमा भारतमा विलिन गराउँदा पनि राम्रो हुन्छ भनेका छन् भनेको सुने भन्ने अभिव्यक्ति पनि पाइन्छ । त्यो त उनको सैद्धान्तिक विचारमा ठूलो प्रहार हो नि त । कम्युनिस्ट सिद्धान्तमा कम्युनिस्ट भएर म बिग्रिएँ भन्नु आम हुने कम्युनिस्टका लागि त राम्रो कुरा भएन ।
तर कुरो के रह्यो भने कला भयो भने, त्यो शक्ति भयो भने काव्यको क्षमता भयो भने आम मान्छै सबै विरोधी भए पनि मान्छेले मन पराउँछन् । भूपिको सैद्धान्तिक विचलनमा मान्छेले प्रश्नचिन्ह खडा गर्लान् । उनलाई मानुन् या नमानुन्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर जसले कविता पढ्छ, भूपिलाई कमजोर, नराम्रो कवि भन्न सक्दैन । प्रगतिवादी कविमा भूपिभन्दा पनि माथिल्लो तह तप्काको, जो सधैँभरि जीवनमा कम्युनिस्ट भयो र सधैँ काव्य लेख्यो, त्योभन्दा मथिको लोकप्रिय शक्तिशाली कवि छ भने देखाउनु पर्यो ।
मलाई त के लाग्छ भने, को के हो भन्दा पनि कसले कस्तो लेख्यो ? यसले बढ्ता महत्त्व राख्छ ।
प्रज्ञाप्रतिष्ठानमा नियुक्त भएपछि उनको कवितात्मक क्षमतामा कमी आयो भन्ने छ, त्यसो भएको हो ?
उनको कवितात्मक क्षमतामा ह्रास चाहिँ उनी प्राज्ञ नभएका भए पनि आउँथ्यो । किन सक्थ्यो भने कविमा आउने त्यो जुन भाव छ नि, भावको उच्छलन, त्यसले सधैँ सबैलाई साथ दिन्छ भन्ने छैन । के भनिन्छ भने, त्यो वर्डस वर्थलाई पनि त्यस्तै भयो रे । जो चाहिँ अझ बढी रोमान्टिसिजममा, बढी स्वच्छन्दतावादी जो छ नि, जो चाहिँ भित्रको ओभरफ्लोलाई विश्वास गरेर लेख्छ नि, त्यो ओभरफ्लो कम्ती हुनेवित्तिकै कविताको शक्ति कम हुँदै जान्छ ।
तर क्लासिकल कवि शास्त्रीयवादी कवि अर्काथरी हुन्छन्, जो अलिकति भाव भेट्टायो भने पनि फेरि त्यो कलाले यताउति पारेर लेखिरहने, उनीहरूमा त्यो त्यति कम नहोला । तिनले आफ्नो चातुर्य देखाउन सक्छन् । तर जो रोमान्टिक छ, जो ह्वात्तै आयो, जो नेचुरल छ, त्यसलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ । अन्कन्ससको जुन प्रस्तुतीकरण छ, अनकन्सस त हो नि त्यो ओभरफ्लो । उनी त्योभित्र नभएकै भए पनि उनीभित्रको त्यो कमजोरी हुन सक्थ्यो ।
बोल्दा भाषण गर्दा पञ्चायततिर उनका ठाउँठाउँमा आक्रोश देखिन्छ । यसको अर्थ उनले कविता लेख्दाखेरी समातेर थुन्ने, पक्रने सामाथ्र्य झन् राख्ने थिएनन् । तर कुरा के भयो भने अलिकति फिलिङ कम भयो र साथ दिन छोडेकै हो । साथ दिन छोडेको एउटा प्रमाणको रूपमा मैले ‘भूपि शेरचन ः विश्लेषण र मूल्याङ्कन’मा पनि भनेको छु, घुम्ने मेचमाथि अन्धो मान्छे या योभन्दा अगाडि आएका विम्बहरू जुन छन् नि, त्यो पछिल्ला भूपिका शेरचनका कवितामा दोहोरिएका छन् ।
प्रज्ञामै गएपछि उनले म आधा अन्धो भएँ भनेर आफैप्रति असन्तोष व्यक्त गरेका छन्, केले त्यसो भन्न बाध्य गरायो ?
मनोद्वन्द्व भनिन्छ नि, त्यो भूपि शेरचनमा पक्कै पनि रह्यो होला । जस्तो खेमाबाट आएर यस्तो ख्याति कमाए, त्यसमा सधैँ रहन सकेनन् । हुन त कम्युनिस्ट सिद्धान्तबाटै प्रभावित भएर कविता लेख्न थालेर उनी यति माथिल्लो तहको कवि भए । जुन आधारलाई टेकेर भूपि शेरचन उभिए त्यो आधार नै छोडिसकेपछि, त्यो आधारमै भुइँचालो गएपछि उनको अन्तरहृदयमा केही हलचल त पक्कै ल्यायो । अब त्यसलाई ढाकछोप गर्न मलाई केही छैन । कम्युनिस्ट छोडेर ठिकै गरेँ भन्ने भूपि शेरचनका अभिव्यक्ति त आएकै छन् ।
मलाई के लाग्छ भने जीवनका लागि आवश्यक पर्ने, स्वास्थ्यका लागि आवश्यक पर्ने सहुलियतहरू प्राप्त गर्न भूपि गएका हुनसक्छन् । या ककसले भनेर त्यहाँ गए होलान्, त्यो कुरा एउटा रह्यो । अर्कोतिर यो द्वन्द्वले जिन्दगीमा आउने एउटा मात्र समस्या छैन, आर्थिक समस्याका कारण त्यतातिर लाग्नुपर्यो होला । अर्कोतिर लाग्दाखेरी आक्रोश त धेरै नै भयो होला । कम्युनिस्ट होइन, यो यस्तो हो भन्ने कुरा त रह्यो नि ।
दुईवटाको जुन द्वन्द्व हो, यताउता यताउता गर्दा पक्कै केही गर्यो । बेलाबेलामा सत्य पनि बोले होला । बेलाबेला त्यसलाई ढाकछोप गर्न सचेत मनले मैले जे गरेँ ठिकै छ, कम्युनिस्टहरू ठीक थिएनन् । काँग्रेसहरू ठीक थिएनन् । राजै ठीक रहेछ देशभक्त रहेछ भन्ने लाग्यो होला । तर कहिलेकाहीँ कस्तो पनि लाग्छ भने शङ्कर लामिछानेले एक ठाउँमा एकदमै क्रान्तिकारी, एकदमै भयङ्कर भएको मानिस अन्तिमतिर गएर फेरि विसर्जनवादमा गएर टुङ्गिन्छ भनेका छन् ।
भूपिलाई राज्यले सम्मान गर्न सक्यो कि सकेन, के देख्नुहुन्छ ?
मलाई त सम्मान गर्न सकेजस्तो लाग्दैन । भूपि शेरचन भनेका समकालीन साहित्य फाँटको नेतृत्व गर्ने कवि हुन् । कविताहरू प्रशस्त लेखिएका छन् । अहिले कविता लेख्ने कतिपय कविमा पनि भूपिको छायाँ कताकता रहेको देखिन्छ । भनेपछि उनको प्रभाव अझै छ । घुम्ने मेचमाथिको अन्धो मान्छे अझै बाँकी छ र त्यसभित्र उनले अभिव्यक्त गरेका समस्याहरू अझै छन् । महिलाहरू अझै त्यस्तै समस्यामा छन्, लाहुर जाने अझै त्यही समस्यामा छन्, अझै टुङ्गिएको छैन । भूपिका ती सपना अलिकति पनि पूरा भएका छैनन् । देश विकासतिर गएको छैन । तानातान, मारामार, काटाकाट अहिलेसम्म सकिएको छैन, भूपिको त्यो प्रभाव छँदैछ ।
भूपि शेरचन प्रज्ञामा गए, त्यसैलाई सम्मान मान्ने हो भने त छुट्टै कुरा हो । भूपिका कुराकानी सुन्दा त्यो राजाबाट, व्यक्तिगत तहबाट भएको जस्तो पनि लाग्छ । तर राज्यले जुन एउटा धारलाई अङ्गीकार गरेर कविताको जुन धार प्रतिनिधित्व गरे, त्योअनुसार चाहिँ भूपिलाई राज्यले उचित सम्मान गर्नै सकेन ।
तिहारका बेला, लक्ष्मी जयन्तीका बेला केही हल्लाखल्ला गरेको त पाइन्छ । तर खोइ त धेरैजसो कविहरूको सम्मान देख्दिनँ । मोतीरामा भट्टकै हेर्नुस्, जसले नेपाली साहित्यलाई यो ठाउँमा ल्याउनका लागि २३ वर्षकै उमेरमा त्यत्रा काम गरे, भाषासाहित्यका लागि उनकै पनि केही भएजस्तो लाग्दैन ।
तपाईंलाई उत्कृष्ट लागेका भूपिका कविता कुनकुन हुन् ?
भूपि शेरचनका सबै कविता उत्कृष्ट नै छन् । एक दुईवटा कविता नेपाल, सर्पको खोजीमा धेरै स्तरीय कविता हुन् । अघि पनि भने घुम्ने मेचमाथिको अन्धो मान्छे कविताका कतिपय विम्बहरू पछिल्ला कवितामा दोहोरिएका छन् । त्यो चाहिँ भूपि शेरचनका कमजोर पक्ष हुन् ।
सबैभन्दा उत्कृष्ट कविता चाहिँ घुम्ने मेचमाथिको अन्धोमान्छे नै हो । त्यस कवितामा भएका विम्ब हेरौँ न कति बेजोड लाग्छ । मैन बत्तिको शिखा पनि महत्त्वपूर्ण लाग्छ, यस्तै यो हल्लै हल्लाको देश, गलत लाग्छ मलाई मेरो देशको अलि महत्त्वपूर्ण लाग्छन् ।
अहिलेका नयाँ कविहरूमा भूपिको प्रभाव कतिको पाउनु भएको छ ?
भूपि शेरचन जुन युगमा आए, त्यो बेलामा जुन समस्या थिए, अहिले पनि ती समस्या घटेका छैनन् । त्यसकारण कविले लिने यही समाजबाट विषयवस्तु लिने हो । त्यस कारण पनि कताकता केही कुरो मिल्न आउँछन् । ठ्याक्कै भूपिका कविता हेरेर नलेखे पनि त्योबेलाका समस्या र अहिलेका समस्या उस्तै छ । भनेपछि त विषयवस्तु उस्तै त आउने नै भयो ।
भूपि पनि गद्यमै कविता लेख्थे । पहिलो कविता सङ्ग्रहमा त उनले झ्याउरे लयमा लेखेका छन्, नयाँ झ्याउरे । त्यसपछि निर्झरमा पनि केही कविता पद्यमा थिए । घुम्ने मेचमाथिको अन्धो मान्छेमा पूरै गद्य कवि हुन् तर पनि पद्यात्मकताको आभास दिने, लयात्मकता दिने खालका अत्यधिक कविता लेखे । उनको अर्को कवितामा पनि त्यही नै रह्यो । गद्यमा लेखेको छन् अहिले पनि, त्यो गद्यका कारणले गर्दा त्यसको मेल हुनु स्वाभाविकै लाग्छ ।
भूपिले कविता कला चाहिँ चिनेका छन् । उनका कविता मात्र होइन, उनले दिएका अन्तरवार्ता हेर्यो भने पनि ती कवितात्मक लाग्छन् । उनले बोलेका गद्य वाक्यहरू पनि कवितात्मक लाग्छ ।
‘संसार जेट युगमा छ,
अहिले पनि हामी पेट युगमा छौँ’
यस्तो यस्तो कुरो कहाँबाट कसरी आउँछ होला ? अनुप्रासहरू, ठ्याक, ठ्याक, ठ्याक मिलेर । त्यो गद्य पनि पूरै कवितात्मक छ भने कवितामा त कविता नहुने कुरै भएन । अघि पनि भने पर्सनल विम्बका प्रयोगका दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने त्यो सशक्तता प्राप्त गर्नलाई चाहिँ समय लाग्छ ।
अहिलेका कविहरूपमा पनि ती समस्याहरूबाट परिचित छन् । कविताहरू पनि राम्रा राम्रा आइरहेका छन् । तर एउटा फरक कुरा के हो भने यो युगकै बेग्लै अर्कै एउटा पहिचान हुन् भूपि । इडिपस कम्प्लेक्स भन्ने फ्रायडको एउटा सिद्धान्त छ । त्यो चाहिँ छोराको बाबुप्रतिको विरोध र आमाप्रतिको निकटता हुन्छ नि, कविको पनि के हुन्छ अरे भने नि पुरानो पुस्तासँगको विरोध र आफ्नो बेग्लै किसिमको नयाँ आइडेन्टिटी हुन्छ भनेर भनेका छन्, केही समीक्षकहरूले । त्यो भन्न खोजेको नराम्रो होइन । देवकोटाको लेखनप्रतिको विरोध या भूपि या लेखनाथ या सम या माधव घिमिरेप्रतिको विरोध । यतातिर आफ्नोतिर चाहिँ लाग्नुपर्छ, धेरै धेरै लाग्नुपर्छ । तर स्तरीयता र लोकप्रियता दुईवटालाई मिट गराउने काम चाहिँ गर्नुपर्छ । धेरै कम कविहरू त्यस स्तरमा चाहिँ खेलिरहनु भएको छ । तर के भने ह्वात्तै भूपि शेरचनको जुन हाइट छ नि त्यसलाई उछिन्ने हुनुपर्यो । त्यो चाहिँ अझै प्रयास गर्नुपर्छ ।
भूपिबारेका केही किंवदन्ती छन् ?
भूपिका बारेमा विभिन्न किंवदन्ती छन्, एउटाले लेखेको थियो– ‘भूपिले विगार्यो कविता’ भन्नेमा कविता भएको ठाउँमा कन्या थपेको छ । दुईवटा त उनले बिहे गरेका हुन्, दुईवटै बिहे गर्दा भूपिले कन्या विगार्यो भन्नु त अफ्ठ्यारो होला । कसै कसैले त्यो प्रसङ्गहरू पनि झिक्छन् ।
उनी आफैंले पनि एक ठाउँ अशेष मल्लले लिएको एउटा अन्तरवार्तामा तपाईंको प्रेम प्रसङ्ग भनेका छन् । अनि भूपिले भनेका छन्, ‘प्रसङ्गको कुरा नगरौँ, कतिको बसिसकेको घर पनि उड्छ’ । यसले के देखाउँछ भने उनी आफै एउटा छ्याङ्ग खुला किताब जस्ता थिए । कुरो लुकाएर गर्नेखालका मानिस थिएनन् उनी ।
अङ्ग्रेजीमा पर्सन भनिन्छ नि, पर्सन भनेको ल्याटिन भाषाको पर्सोनाबाट आएको हो । यसको अर्थ मुखुण्डो हो । मान्छे मात्र संसारमा एउटा यस्तो प्राणी हो, जो मुखुन्डो लगाएजस्तो हुन्छ । बाहिर एउटा देखिन्छ, भित्र अर्कै हुन्छ । त्यो थाहा पाउँदैन मान्छे । साँचो कुरा भन्दैन मान्छेले, भन्न त भन्छ तर कुरो अर्कै हुन्छ । ओ हो तपाईं क्या राम्रो गीतकार भन्दियो, बाहिर गएर गाली गर्छ । तर भूपि शेरचन छ्याङ्ग थिए, केही राख्दैन थिए ।
कहिलेकाहीँ के हुँदो रहेछ भने सामान्य कुराहरू पनि आफ्नो सिर्जना शक्ति बलियो भयो भने, त्यो लेखनाथले लेखेका छन् नि ‘चन्द्रले रश्मिको दाग मेटाएकै छ बेसरी’ भनेजस्तो हुँदो रहेछ । प्रतिभाको त्यो फ्लोले सानातिना गल्तीलाई पनि ओझेलमा पार्छ ।
भूपिका केही श्लोकहरू :
(मेरा साथीहरु कविताबाट ।)
‘भूपि शेरचन !’
(‘भूपि शेरचन’बाट व्यङ्ग्यात्मक सेल्फ पोट्रेट)
हामीले फेर्ने प्रत्येक सासमा रगत छ सहिदको
हाम्रो मुटुको प्रत्येक चालमा धड्कन छ सहिदको
हाम्रो खुसीको प्रत्येक पलमा जीवन छ सहिदको
(‘सहिदहरूको सम्झनामा’बाट ।)